Venezuela: Gadoodkii militari oo baqtiyay iyo xiisadda dalka oo kacsan – Kasmo Newspaper
Venezuela: Gadoodkii militari oo baqtiyay iyo xiisadda dalka oo kacsan
Updated - August 7, 2017 9:25 pm GMT
London (Kasmo), Gadoodkii military ee galinkii hore ee shalay waxaa baqtiiyay ciidanka Xoogga oo u hoggaansan Madaxweynaha Nicolas Maduro, laakiin xiisadda dalka ayaa wali u muuqata mid kacsan.
Mar uu dadweynaha la hadlayay ayuu Taliyaha Guud ee Xoogga Dalka Venezuela, Jesus Suarez Chourio, (Sawirka), wuxuu yiri: “ Waxaa ina qabsaday weerar calooshooda u-shaqaystayaal ku soo qaadeen nabadgalyadii dalka”.
Taliyuhu wuxuu falka gadoodka ku tilmaamay mid argagixiso ah, wuxuuna sidaas ku sheegay in ciidanka geesiyaasha ah ee Venezuela “FANB” (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), si geesinimo leh uga hortageen soona afjareen.
Axaddii shalay nin Dhamme hore ahaa, oo loo raadinayay in ka badan 3 sano lugtii uu ku lahaa iskuday afgambi oo hore, laguna magacaabo Juan Caguaripano, ayaa ku qanciyay qaybo ka mid ah Guutada 41aad ee Gawaarida Gaashaaman in ay hubka qaadaan.
Ciidankaas oo ku sugnaa Xerada “Paramacay” ee ku dhow magaalada 3aad ee dalka, Valencia, waxaa weerar ku qaaday xoogagga Xukuumadda taabacsan, waxaana ku geeriyootay 8, halka 21 kalena ku dhaawacmeen.
Caguaripana iyo kooxdiisii waxaa la sheegay in ay baxsadeen iyaga oo horey u sii qaatay hubkii mid ka mid ah kaydadka, in kasta oo gadoodkii la bakhtiiyay waxaa la is weydiinayaa inta ay le’egtahay daacadnimada kaadarka hoose ee ciidanka.
Dalku wuxuu leeyahay 2 Gole : Barlamaan la soo doortay sannadkii 2015kii oo mucaaradku ku leeyihiin aqlabiyadda sare iyo Golaha Dastuuriga (Constituent Assembly) oo dhowaan uu sameeyay Madaxweyne Maduro.
Labada Gole ayaa is dhinac ordaya iyaga oo wada deggan Xarunta Barlamaanka ee Caasimadda Caracas oo lagu magacaabo “Placio Federal Legislativo”, qalalaaasaha dalka ka taaganna wuxuu Madaxweynuhu ku eedeynayaa Maraykanka iyo Colombia.
Golaha cusub ee Dastuuriga oo ka kooban 545 xubnood, sida Wargayska Guardian qorayna ka kala socda qaybaha kala gadisan ee bulshada waxaa loo codeeyay 30kii July, waxaana la caleema saaray 4tii Agosto iyaga oo loogu talagalay in ay dib u qoraan dastuurka dalka.
Xubnahaas ayaa markiiba Guddoomiye u doortay Delcy Rodriguez, Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda aadna ugu dhow Madaxweyne Nicolas Maduro. Khudbaddii ugu horreysay markii la doortay, Rodriguez waxay dadka ka soo horjeeda Madaxweynaha ku tilmaantay in ay yihiin “Fashiste”, dalkuna uusan oggolaan doonin faragalin shisheeye.
Maalintii ku xigtay ee Sabtidii, 5tii Agosto, Guddoomiyaha Golahaas ayaa xilkii ka qaadday Xeer-ilaaliyihii Guud ee Qaranka, Luisa Ortega Diaz, waxaana ka dhashay cabashooyin mucaaradka iyo qunyar socodka xukuumadda u janjeera isku bahaysanayaan.
Bilihii u dambeeyay oo dibadbaxyada looga soo horjeedo Maduro sii xoogaysanayeen, dad lagu qiyaasay 100 qofood ayaa ku dhimatay, waxaana ku dhaawacantay 1,500 oo qof, halka dad gaaraya 500 xabsiyada loo taxaabay.